Dị nnọọ ka ịzụ ụgbọala, ịzụta a eji RV (Ntụrụndụ Vehicle) ma ọ bụ Camper nwere ike ịbụ oké ụzọ iji nweta ihe dị egwu ndibiat. Dị nnọọ ka ụgbọala, RV si ejighi uru na oge ha na-chụpụrụ oyi nke otutu. Ma, gị mkpa iji chebe onwe gị na gị ego site na-eme obere nnyocha banyere RV na ị na-eme atụmatụ na ịzụta.
Ego An RV Vin Number Lee
Dị nnọọ ka ụgbọala, RV nwere a vin (ụgbọala Identification Number) ha na-emi odude ọtụtụ dị iche iche ebe na ihe RV. Ha na-emekarị enịm ke otu ebe na a ụgbọala ga-ha, na dashboard na ị ga-enwe ike ịhụ ya site na-achọ site n'ihu nke windshield. Otú ọ dị, nke a bụ bụghị mgbe niile ikpe. Manufacturers etinyekwa ha dị iche iche ebe dị ka engine na eku. I nwekwara ike anya na isi nkwado (igwe okpomọkụ nkwado) , na sterịn kọlụm, ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ njem ụzọ ma ọ bụ ụzọ post, na mgbe ụfọdụ na firewall. I nwekwara ike ego ndị nwe ntuziaka ịhụ ma ọ bụrụ na ọ na-depụtara e, Ma ọ kasị mma iji gosi na ọnụ ọgụgụ bụ otu ihe ahụ dị ka nke na ọ bụ nke dị RV.
Ọ bụrụ na onye nwe nwere ha, ị nwekwara ike anya na ịzụta akwụkwọ, na aha ma mkpuchi Docs. The vin bụ ihe pụrụ iche na RV, ọ dịghị abụọ moto n'ụlọ nwere otu onye, n'ihi ya, ọ dị mkpa na ị ga-esi vin nọmba nri.
N'otu ụzọ ahụ na ị ga-ele anya ruo a vin maka ụgbọ ala na ị na-atụle ịzụta, i nwere ike na-agba ọsọ na-RV vin ego nakwa. Akụkọ a ga-enye gị ozi na gbasara ndị ụgbọala onwe ya, ihe RV decoder na-agwa gị onye emeputa bụ, ebe ọ e wuru na nhọrọ si emeputa na enginge na nnyefe ọmụma.
Site na-agba ọsọ na-RV vin nọmba search ị ga-ahụkwa ọzọ ihe ọmụma bara uru, dị ka ma ọ bụrụ na RV ka a kọrọ na ihe mberede na otú ọtụtụ ọ bụ. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na RV agbanweela aka ugboro ole na ole ọ ga-nche ka ị na-ekwe omume odometer nsogbu ma ọ bụ mpịakọta Akwadoo. Ọ ga-depụta bụrụ na e nwere bụla o kwere omume liens na RV na onye nwe adịghị akwụ ya ụgwọ. Ma lezie ya wee gosi nke ọ bụla nwere na-echeta na e kwara.
Site na-eme ihe RV vin ego i nwere ike zọpụta onwe gị ụfọdụ nwere isi ọwụwa ala n'okporo ụzọ na ọ ọnụ ala mkpuchi maka ụfọdụ udo nke uche mgbe ịzụta a eji RV.